आज राति मान्छेको मासु काटेर चढाइन्छ पाटनको यो मन्दिरमा ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
आज राति मान्छेको मासु काटेर चढाइन्छ पाटनको यो मन्दिरमा ?
कोरोनाको पिसिआर टेस्ट गर्न नाकमा सुइरो घुसाउँदा मेरो सातोपुत्लो उडेको थियो। कहिलेकाहीँ इन्जेक्सन लगाउनुपर्‍यो भने सुई देखेरै सिरिंग भएर आउँछ।
यस्तो पितुर्के मान्छेलाई जीउको मासु काट्ने वा छाला ताछ्ने कुरा सुन्दा के भयो होला!
मेरो त डरले जीउभरि काँडा उम्रेका थिए, जब मैले पाटन, सुबहाल (सौबहाल) को एउटा मन्दिरमा मान्छेको मासु चढाएर पूजा गरिन्छ भन्ने थाहा पाएँ।
धेरैलाई यस्तो परम्पराबारे सुनेरै अचम्म लाग्यो होला! यस्तो पनि पूजा हुन्छ कहीँ!
हुँदो रहेछ, भइरहेकै छ।
यो सुबहालको जय मनोहर महाविहारस्थित महांकाल मन्दिरको कथा हो, जहाँ हरेक दसैंमा नवमीको रात भक्तजनहरूले आफ्नै शरीरको मासु काटेर वा छाला ताछेर यज्ञवेदीमा अर्पण गर्छन्।
आज म तपाईंहरूलाई यही पूजाविधि र यसको कथा सुनाउँदैछु।
धेरैलाई त सुबहाल कहाँ पर्छ भन्ने नै थाहा नहोला। काठमाडौं उपत्यकामा मूलसडकबाट भित्र गल्ली-चोकहरू चहार्दा यस्ता अनेकौं बहाल भेटिन्छन्, जहाँ प्रायः मान्छे बिरलै पुगेका हुन्छन्। सुबहाल त्यसैमध्ये एक हो।
म तपाईंहरूलाई त्यही ठाउँ लैजान्छु है त।
पाटनको सुबहालस्थित जय मनोहर महाविहार छिर्ने ढोका। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
यहाँ टाउको निहराउनुपर्ला है, ढोका होचो छ।
ठाउँ त आइपुगियो, अब हामी काठमाडौं उपत्यकामा सायदै अन्त देखिने अनौठो पूजाको चर्चा गरौं।
हामीसँग यो पूजाविधि र यससँग जोडिएको कथा विस्तार लगाउन ५० वर्षीय स्थानीय किरण शाक्य छन्।
‘ओहो निकै दुख्छ होला हगि?’ मैले तर्सिंदै सोधेँ।
उनले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘चौटा–चौटा मासु चट्टचट्ट काट्ने कहाँ हो र! अलिकति छाला काटेर चढाउने हो।’
‘रगत त आउला नि!’ मेरो डर थामिएकै थिएन, ‘छिसिक्क काँडा बिझ्दा त कस्तो दुख्छ! झन् सियोले घोचेर ब्लेडले काट्दा दुख्दैन होला र!’
‘अलिअलि त दुख्छ नि। रगत पनि आउँछ। तर, तपाईंले सोचेजस्तो सहनै नसक्ने हुँदैन,’ उनले हलुका पारामा भने, ‘ब्लेडले काट्दा रगत आए पनि त्यो रगत आगोमा चढाउनु हुँदैन।’
उनले मलाई ढुक्क पार्न थपे, ‘अहिलेसम्म कसैलाई इन्फेक्सन भएको वा घाउ दुखेर औषधि नै खानुपरेको सुनेको छैन।’
‘अनि एक ठाउँको मात्र चढाउने कि धेरै ठाउँको?’ मैले सोधेँ।
‘कसैले एक ठाउँको चढाउँछन्, कोही–कोही नडराउनेहरूले एकैचोटि १०–१२ ठाउँकै चढाउँछन्।’
बाफरे! कस्तो डर नलाग्ने हो क्या, आफ्नै जीउमा सियो रोप्न, आफ्नै जीउ ब्लेडले काट्न!
तपाईंहरूलाई डर लागेन!
किरणले भनेजस्तो छाला मात्र काटोस् या चौटा मासु नै झिकोस्, शरीरको अंग ताछ्न त मुटु दह्रै चाहिन्छ होला बाबै!
महांकाल मन्दिरमा शरीरको छाला काटेर चढाइँदै। तस्बिर सौजन्य: किरण शाक्यमहांकाल मन्दिरमा शरीरको छाला काटेर चढाइँदै। तस्बिर सौजन्य: किरण शाक्य
यति मात्र कहाँ हो र! सियोले घोच्दा र ब्लेडले ताछ्दा ‘ऐया’ भन्न नपाइने रहेछ। कसैले ‘ऐया’ भन्यो भने यसबाट पाइने पुण्य त्यही यज्ञवेदीमा स्वाहा हुन्छ रे!
त्यसैले डराउनेहरू भागै लिँदैनन्, किरणले भने, ‘हरेकले हरेक वर्ष भाग लिनुपर्छ भन्ने छैन। इच्छा हुनेहरू बर्सेनि आउँछन्, नभए कसैलाई करकाप छैन।’
उनी आफैंले जम्मा चारचोटि भाग लिएका रहेछन्। अन्तिमचोटि गरेकै बाह्र–पन्ध्र वर्ष बितिसकेछ। यसमा सरिक हुन सुबहालकै स्थानीय वा शाक्य कुलको हुनुपर्ने बन्देज छैन। टोलबाहिरका मान्छे आउने क्रम बढेको उनले बताए।
‘पहिले–पहिले केटाहरूले मात्र भाग लिने चलन थियो,’ उनले भने, ‘अचेल केटीहरूलाई पनि खुला छ। पोहोर मेरै छोरीले भाग लिइन्।’
अनि आफ्नो मासु आफैं काट्नुपर्छ कि अरूले काटे पनि हुन्छ?
मेरो यो प्रश्नमा किरणले भने, ‘मैले त आफैं काटेको थिएँ। कसैलाई अर्काले काट्दिन्छन्। काट्ने मान्छेको आँखा तेजिलो र हात नकाम्ने हुनुपर्छ। नभए ठूलो घाउ हुनसक्छ।’
पूजाविधिपछि अब हामी कुरा गरौं यो संस्कारसँग जोडिएको कथाको।
स्थानीय किम्बदन्ती मान्ने हो भने यो करिब नौ सय वर्ष पुरानो चलन हो। यसलाई तत्कालीन समयमा दिइने ‘नरबलि’ को अवशेषका रूपमा लिइन्छ।
यसका लागि सुबहाल बस्ती र जय मनोहर महाविहार स्थापनाको कथा थाहा पाउनुपर्छ। यो महाविहार विक्रम सम्बत् ११८३ देखि ११९३ बीच तत्कालीन राजा इन्द्रदेवले स्थापना गराएको भनाइ छ।
कथा सुरू हुन्छ लिच्छविकालीन काठमाडौंको राजधानी हाँडीगाउँबाट।
विक्रम सम्बत् ९३६ तिर हाँडीगाउँ अर्थात् विशालनगरमा भयंकर आगलागी भयो, जसले स्थानीय बासिन्दाको जीवन तहसनहस पारिदियो। सबैको घरबार उजाडियो। धनसम्पत्ति नोक्सान भयो। लिच्छवि राजाहरूका दरबार ध्वस्त भए। मानगृह र कैलाशकूटजस्ता भव्य दरबार आगोको लप्कामा लपेटिए।
किरण शाक्य। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी